खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि
चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, २६ माघ । प्रदेश नम्बर पाँचमा गाडी खरिदमा भएको अनियमितता पुष्टि भएको छ ।
दुर्घटना न्युनीकरणका लागि आँखा जाँच
राम नारायण पण्डित, सिरहा, २६ माघ । दुर्घटना न्युनीकरण गर्न अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट मिर्चैयाले सार्वजनिक सवारी चालकको आँखा जाँच गरेको छ ।
मिर्चैया महोत्सवको पुर्वसन्ध्यामा बृहत सरसफाई
मुकेश कुमार यादव, सिरहा, २६ माघ । “प्रथम मिर्चैया महोत्सव–२०७५” को पुर्वसन्ध्यामा बृहत सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । माघ २८ गतेदेखि हुन गईरहेको महोत्सवलाई सभ्य र भव्य बनाउने उद्देश्यले बृहत सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
निःशुल्क तयारी कक्षा
नेहाल खान, २६ माघ, वीरगन्ज । यु. डी. बाइ–सेफ कम्प्युटर र नेसेन्ट एजुकेशनको संयुक्त आयोजनामा अनुभूति एजुकेशन र ट्रिटन कलेजको सहयोगमा एस ई. ई. दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा सम्बन्धी जानकारी गराईएको छ ।
सरस्वती पुजा आयोजना गर्दै मैथिल युवा क्लब
काठमाडौं, २५ माघ । विगत १३ वर्षदेखि मैथिल युवा क्लबले काठमाडौंको शान्तिनगरमा सरस्वती पुजा महोत्सव गर्दै आएको छ ।
बारा, २४ माघ । प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले विद्यालयमा अध्यात्मका साथै योगा अभ्यासका कक्षाहरु पनि सँचालन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
पोखरामा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी सहसचिवस्तर बैठक सुरू
काठमाडौं, २४ माघ । नेपाल र भारतको १० वर्ष पुरानो वाणिज्य सन्धीको पुनरावलोकनका लागि सहसचिवस्तरीय बैठक पोखरामा सुरू भएको छ ।
आचार्य बालकृष्णले ‘आचार्यकुलम’ स्थापना गर्ने
काठमाडौं, २४ माघ । पतञ्जली आयुर्वेद हरिद्वार भारतका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्णले पश्चिम नवलपरासीको सुनवलस्थित बाबा बर्दगोरिया धाम क्षेत्रमा ‘आचार्यकुलम’ स्थापना गर्न लागेका छन् ।
निर्वाण चौधरीलाई वाईपीओ अवार्ड
काठमाडौं, २४ माघ । चौधरी गु्रपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीलाई सामाजिक कार्यमा उत्कृष्ट योगदानका लागि यङ्ग प्रेजिडेंट्स अर्गनाइजेशन (वाई.पी.ओ.) ले सोसियल इन्टरप्राइज नेटवर्क सस्टेनेबिलिटी (सेन) अवार्डद्वारा सम्मानित गरेको छ ।
बलात्कार र व्यभिचार विरुद्ध आक्रोश
काठमाडौं, २४ माघ । चिसो माघे झरिलाई स्वागत गर्दै कविहरुले बलात्कार र व्यभिचारका विरुद्ध कविता मार्फत आफ्ना अभिव्यक्तिहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
कपिलवस्तु, २३ माघ । कपिलवस्तु नगरपालिका–५ तौलिहवा(मर्यादापुर भित्रि सडकखण्डमा यशोधरा गाउँपालिका–४ पोखरा बिटुवा बस्ने ४९ वर्षीय नन्दलाल रहिदास बिहीबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
हुवावेमाथि अमेरिकी आक्रमण !
काठमाडौं, २३ माघ । अमेरिकी प्रशासनले चीनको अग्रणी प्रविधि एवम् दूरसञ्चार कम्पनी हुवावे विरूद्ध फौजदारी आरोप सम्बन्धी विभिन्न अभियोगहरू लगाएको छ ।
मन्त्री महासेठद्वारा पुल उद्घाटन
जनकपुरधाम, २४ माघ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले रातु पुल उद्घाटन गरेका छन् ।
दोस्रो मेयर कप प्रतियोगिता सूरु
कपिलवस्तु, २३ माघ । बुद्धभूमि नगरपालिकाको दोस्रो मेयर कप खेलकुद प्रतियोगिताको सूरुवात भएको छ ।
बसमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु
रुपन्देही, २३ माघ । बुटवल उपमहानगरपालिका–१ जितगढीस्थित सडकमा लु.१९ प ८१० नम्बरको मोटरसाइकल लु.१ ख ७०६६ नम्बरको बससँग ठक्कर खाँदा गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
कैलाली, २३ माघ । सुतिरहेकै अवस्थामा एक युवती मृत फेला परेकी छिन् ।
पर्सा, २३ माघ । वीरगंज महानगरपालिका–२४ रामगढवा बस्ने १९ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा मंगलबार २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
दाइजो प्रथाको कारण शिक्षामा असर, महिला हिंसामा बृद्धि
राकेश यादव, रौतहट, २३ माघ । तराई मधेशमा दाइजो प्रथाको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सामाजिक विकृतिको रुपमा पहिचान गरिएको दाइजो प्रथाको कारण शैक्षिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेका छन् ।
लुम्बिनी व्यूरोले दियो कडा चेतावनी
शिव डुम्रे, लुम्बिनी, २३ माघ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान संचालन गरिरँहदा बुधबार अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका ४ केरुङ्गाबाट
विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने
विराटनगर, २३ माघ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगेको सरकारले बुधाबारदेखि प्रदेश नं १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ ।
‘करियर गाइडेन्स सेसन’ परामर्श सञ्चालन
काठमाडौं, २३ माघ । भारतका तीन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिले नेपालका विभिन्न कलेजमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई ‘करियर गाइडेन्स सेसन’ परामर्श सञ्चालन गरेका छन् ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको शुभारम्भ
रुपन्देही, २३ माघ । प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा स्थापना गरिने स्मार्ट कृषि गाउँको प्रारम्भ गरेको छ ।
अब छोरी पढेर बेरोजगार भएर बस्दैन : मुख्यमन्त्री राउत
सिरहा, २२ माघ । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले अब छोरीले पढेर बेरोजगार भएर बस्न नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
६ लाख धरौटीमा भ्रष्टाचारका आरोपी रिहा
काठमाडौं, २२ माघ । बृहत् जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा भ्रष्टाचार गरेको आरोप तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा सूर्यदेव साह रु छ लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।
पर्सा, २२ माघ । पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका १६ स्थित भन्सार गेटबाट एपीएफ टोलीले विभिन्न किसिमका लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।